Ego mgbakwunye kachasị mma maka ụwa, iri kachasị mma maka ire ere
Ngwunye Ugwu Kachasị Elu 10 kachasị na ụwa
/blog/ibu Loss/Ngwunye Ugwu Kachasị Elu 10 kachasị na ụwa
Ihe na 09 / 01 / 2018 by 阿斯劳 dere na ibu Loss.
ibu Loss Akụkọ ọgwụ ọjọọ
Ngwá ọgwụ ndị mbụ na-efu ọnwụ, ndị a na-ezo dị ka ndị na-ebelata abụba n'oge ahụ, bịara dị na njedebe 1800s. Ọ bụ ezie na ọgwụ ọjọọ kpatara ụfọdụ nsogbu dị egwu, ọ nọgidere na-adị maka iji ruo 1960s.
A na-emepụta ọgwụ ọhụrụ a maara dị ka Dinitrophenol na 1930s wee ghọọ ezigbo ewu ewu na ịchịkwa ọnwụ. Ọgwụ ahụ na-emepụta mmetụta thermogenic n'ime ahụ, na-eme ka ọ ghara ịdị arọ.
N'ihe dị n'etiti 1950, amphetamines bịara nwee ike ma ghọọ onye ịchọrọ ọgwụ ọjọọ. Ọ na-eme ka ihe nhụjuanya dị arọ kwụsị site n'ịkwụsị agụụ. N'ụzọ dị mwute, ọ mụbara ọbara mgbali elu na-akpata, na-eme ka ọ hapụ ahịa na 1968.
Na 1970s, ephedrine ghọrọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ maka mgbapụta ọnwụ. Otú ọ dị, ọgwụ ọjọọ na-akpata ụfọdụ mmeghachi omume ọjọọ ndị mere ka a kpọọ ya ihe ize ndụ.
Na 1973, a kwadoro fenfluramine ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye ọnwụ. Eji mara ya na 1992 mgbe a jikọtara ya na phentermine iji mepụta ọgwụ ọjọọ nke a maara dị ka fen-phen. N'ụzọ dị mwute, ọgwụ ọjọọ ahụ kpatara ụfọdụ nsogbu, nke mere ka ọ hapụ ahịa na 1997. Na narị afọ 21, ọgwụ ọjọọ na-efu, ọtụtụ ndị na-adabere na usoro ọgwụ ndụ, jupụtara na ahịa.
Nkọwa ọgwụ na-efu ọnwụ
A na-ekewa ọgwụ ndị na-akpata ọnwụ na atọ dịka usoro ha si arụ ọrụ ma bụrụ ndị a:
(1) Nkwụsị na-agụ agụụ (Nri)
A na-akpọ ọgwụ ndị na-eri nri nri ndị ọrụ ebere. Ha na-egbochi agụụ mgbe ị na-adọta satiety karịa ka ọ dị na mbụ. Obi iru uju bu obi uto ma obu afọ ojuju nke e nwetara site n'iri nri. Ndị na-egbochi ndị na-egbochi ndị mmadụ na-arụ ọrụ site n'iji ụbụrụ neurotransmitter na ụbụrụ nke na-achịkwa agụụ, nke a maara dị ka noradrenaline (NA).
Ndị ọgwụ ndị a na-ekerịta usoro yiri nke ahụ na NA na ike; n'ihi ya, ọ na-ejikọta otu ndị natara dị ka noradrenaline.
Ngwuputa ihe omimi nke ndi mmadu.
Ọgwụ ndị ahụ na-eme ka ọrụ noradrenaline dịkwuo mma na '' ebe a na-enye nri '' nke ụbụrụ mmadụ, hypothalamus. Hypothalamus nke mmadụ na-achịkwa nguzo ike na sistem ahụ. Achịkọtara banyere ụlọ ahịa ike n'otu n'otu na hypothalamus nke na-achịkwa oriri na agụụ. Njikọ noradrenaline na arụ ọrụ na hypothalamus nwere mmetụta mbelata na agụụ. Drugsdị ọgwụ ndị a gụnyere:
Mkpụrụ ọgwụ ndị na-ere ọkụ na-ere ọkụ nwere ike inyere aka abụba ọnwụ site n'inwekwu ọchịchọ, ime ka ahụ dị mma, na ịnọgide na-enwe agụụ siri ike. Ha nwekwara ike ime ka ike ịmalite ike site n'ịkwalite ike na ilekwasị anya. Ụdị ọgwụ ndị ahụ gụnyere:
(3) Meziwanye mgbaze
Ọrụ ọgwụ ọjọọ ndị a na-arụ ọrụ site n'ịgbaghasị ikike nke mgbaze usoro iji nweta ihe oriri na nri. Dị ka ọmụmaatụ, a maara Orlistat iji gbochie nkwụsị abụba ma gbochie njide anụ ahụ. E tinyewo ihe mgbakwunye ndị ọzọ iji belata caloric absorption ma gbochie mgbaze. Na nke a, anyị ga-atụle ihe ndị ọzọ gbasara ọgwụ ọjọọ ndị a:
① Oristat CAS: 96829-58-2
② CAS akwukwo: 282526-98-1
Nkọwa ọgwụ na-abawanye uru
N'okpuru ebe a bụ nkọwa dị nkenke na nkọwa zuru oke banyere ọgwụ niile ahụ e kwuru n'elu.
(1) Nchịkọta ndị na-agụ agụụ (Nri)
Sibutramine HCL bụ otu n'ime ndị nchịkọta agụụ na-ewu ewu. Ọ na-agba ma serotonin na NA na ụbụrụ, nke na-emesị na-ejide ndị nabata ha ịchịkwa satty na agụụ.
Ngwọta Sibutramine na nri na mmega ahụ nwere ike ime ka nkwụsị 4.6 buru ibu karịa mmega ahụ na nri. Tinyere imebi ihe oriri, a na-ahụkwa swaramma:
• Kwalite ihe ize ndụ gbasara obi
• Mee ka oke ibu buru ibu
• Mee ka ọbara glucose dịkwuo n'ahụ ndị ọrịa bi na ọrịa shuga
• Mepee profaịlụ lipid
• Na-eme ka ọkwa C-peptide, insulin, na uric acid dị
Ngwurugwu nke Sibutramine HCL
Ngwá ọrụ nke Lorcaserin HCL (Belviq)
Ngwá ọrụ Lorcaserin HCl na-arụ ọrụ iji chịkwaa mgbochi na agụụ. FDA n'ime afọ 2012 kwadoro ọgwụ ahụ maka ndị nwere BMI karịa 30, nakwa maka ndị ọrịa na-enwe 27 Index Body ma ọ bụ karịa ndị nwekwara cholesterol dị elu, ọbara mgbali, na ụdị ọrịa shuga 2. Ọgwụ ahụ na-arụkwa ọrụ iji mee ka onye na-anabata 2CV serotonin na ụbụrụ mmadụ nke nwere ike inyere ndị ọrịa aka na-enwe mmetụta zuru ezu mgbe ha nụsịrị obere.
N'ime ọnwụnwa ahụike, 38% nke ndị okenye (na-enweghị ụdị ọrịa shuga 2) furu efu karịa 5% nke arọ ahụ ha, ma e jiri ya tụnyere 16% nke ndị okenye na-etinye aka na placebo.
③ Ihe dị na HCL CAS Rimonabant: 158681-13-1
Ngwuputa ihe omimi nke Rimonabant HCL
Egwuregwu HCL dị na Rimonabant dị iche iche maka ụdị ọrụ ya dịka onye na-emepụta ihe ntanetị nke 1 (CB-1) pụrụ iche. A na-atọhapụ endocannabinoids na CNS ma kpalie lipogenesis, agụụ, na ịba ụba na mpụta. Ụlọ ọrụ HCL na-agba agba iji gbochie mmetụta endocannabinoids.
A na-etinye ọgwụ ahụ ngwa ngwa mgbe ọ gwọchara ọnụ. Ejiri ọgwụ nke ọgwụ a na-emeso ndị ọrịa buru ibu ma ọ bụ karịa buru ibu na usoro ihe omume nke anọ na-achịkwa, nke a na-akpọ RIO (Rimonabant in Obesity). N'ime ule ndị a, a chọpụtara na ọgwụ a dị irè dika orlistat na sibutramine.
2,4-Dinitrophenol (DNP ma ọ bụ 2,4-DNP o) bụ chemical organic na usoro a na usoro iheomume: HOC6H3 (NO2) 2.
Ọrụ DNP dị ka protonophore, na-ekwe ka protons lefee n'ofe mitochondrial akpụkpọ ahụ ma ya mere ATP synthase. Nke a ga - eme ka ikikere nke ATP ghara ịrụ ọrụ nke ọma. N'ihi ya, ụfọdụ n'ime ike nke a na-eme site na respiration na-ala n'iyi.
Achọghị ọrụ nke ọma dị ka ọgwụ ọgwụ e were. Ka ọgwụ ọgwụ na-abawanye, mmepụta ume na-aghọwanye ihe na-adịghị arụ ọrụ, ọnụ ọgụgụ metabolic na-ebuli elu (na abụba dị elu na-ere ọkụ) iji gboo ike chọrọ ma kwụọ ụgwọ maka arụmọrụ ahụ. DNP bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma mara maka phosphorylation oxidative na-agbagha. Phosphorylation nke ADP site na ATP synthase na-enweta "enweghị njikọ ma ọ bụ wepụ site na oxidation.
(2) Ọkụ na-eme ka abụba
P-synephrine bụ kọmpi bụ alkaloid. Nke a pụtara na ọ bụ ngwakọta organic nke nwere ike ịchọta na ọdịdị ma ọ bụ dị ala. Ụlọ ọrụ ahụ nwere nitrogen dị ka ntọala.
Ngwurugwu siri ike nke synephrine
Caffeine, nicotine, na morphine nọkwa na klas nke alkaloids dị ka ndị nchọpụta si kwuo. A na-ahụkarị synephrine na mgbakwunye nri maka njikwa arọ ma ọ bụ mmefu na egwuregwu.
Kedu ka Synephrine si arụ ọrụ anyị?
Chemicals na p-synephrine emetụta usoro ụjọ ahụ site na-akpali ndị nabatara β3 adrenergic nke na-arụ ọrụ dị mkpa na thermogenesis na lipolysis na abụba aja. Nke a pụtara na ndị nzaghachi a ga - eme ka usoro gị nwee ike ịba abụba maka ike.
Dimethylamylamine bụ ọgwụ e ji emepụta ọgwụ na lab. 1,3-dimethylamylamine (DMAA) bu ihe omimi nke amphetamine nke ejirila mee ihe n'inye ihe nkwado egwuregwu na United States. A na-eji ya eme ihe dika mbu. N'oge a, a na-ere ahịa dimethylamylamine dịka ọgwụ eji eme ọgwụ na-eji na-ebu ibu, ADHD (nlebara anya na-adịghị mma).
Clenbuterol, nke a makwaara dị ka Clen, bụ onye na-adọrọ adọrọ na bronchodilator. A na-ejikarị eme ihe iji chebe megide mwakpo ụkwara ume ọkụ. Nke a bụ ihe dị ka steroid, ma ọ bụghị ezigbo steroid. Ọ dabara na β2 agonists.
Clenbuterol nwere ike ịmalite mmeghachi omume physiological yiri adrenaline. Ọ na-eme ka subtypes na-anabata beta-2 na usoro adrenergic. Nke a na - ebute ntinye nke cAMP (mmepụta nke ATP maka mkparịta ụka na mkpokọta). N'ihi ya, protein kinase A enwekwu. Protein kinase A bụ enzyme nke na-achịkwa lipid, glycogen, na shuga metabolism ọrụ. Mbelata ya na - eme ka mmetụta ahụ na - ere ọkụ dị n'ahụ. Ọ na-eme ka ụzọ ndị ọzọ na-enyere aka na abụba abụba site na usoro ndu nke a maara dị ka fatty acid oxidation.
A na-eji abụba abụba dị ka isi iyi nke ume maka ịrụ ọrụ ahụ. Ọ na-akpali mitochondria ịhapụ ATP, na-eduga ná mmụba nke ọnụ ọgụgụ na-emetụta ụbụrụ. A maara nke ọma na mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke metabolism na-enyere aka na ọnwụ.
sistemụ chemical nke Salbutamol (Albuterol)
Salbutamol bụ ọgwụ na-agwọ ọrịa ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ bụ ụkwara ume ọkụ ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ metụtara COPD. Usoro nke ọgwụ a na-emeghe ma ọ bụ na-agbagha ngụgụ ume iku ume nke ngụgụ nke ume nke ngụgụ mgbe a na-ebute mwakpo ụkwara ume ọkụ. Ebe ọ bụ na Salbutamol nwere mmetụta na-akpali akpali, ụfọdụ ndị na-eji ọgwụ ụkwara ume ọkụ a akwalite ụba ma ọ bụ ibu arọ.
Albuterol dị mma iji mee ihe na mgbatị mmefu n'ihi na ọ nwere mmetụta yiri ya na usoro androgenic dịka mmega ahụ. Ọ na-eme ka akwara dị elu ma na-ebelata ibu.
Ọ bụ ndị bodybuilders jiri ya iji belata abụba ndị ọzọ site na akụkụ ahụ ha nke nwere ike isi ike ịchịkwa ma ọ bụ belata abụba site na ụzọ ndị ọzọ. Mgbe ị na-eji ọgwụ a eme ihe maka mmebi ahụ na arụ ọrụ ọnwụ, a na-ejikarị ya na mpi ma ọ bụ mmiri mmiri. Ọ bụ ezie na ịnwere ike iji salleramol inhaler maka ibu ma ọ bụ abụba ọnwụ ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị nhọrọ dị.
Orlistat bụ onye na-egbu egbu na-egbu egbu ma na-egbu egbu. A na-ejikọta ihe niile na-eri nri na triglycerides site na enyemaka nke pancreatic na lipstrog. Egbugbere ọnụ na-akụda triglycerides na abụba bara uru nke nwere ike ịmịnye ya na obere eriri afọ. Ndị na-emepụta ihe na-egbuke egbuke na pancreatic na-ejikọta ya na pancreatic na egbugbere ọnụ dị na lumen nke eriri afọ na afo na-eme ka enzymes ndị a ghara ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Site na mgbochi nke egbugbere ọnụ ndị a, a na-egbochi abụba ọgwụ nri, na triglycerides na-apụ na feces. Orlistat drug loss drug na-egbochi gburugburu 30 pasent nke abụba oriri na-edozi si nri site na-etinye uche n'ime usoro mmadụ (mgbe 30 percent nke ume na nri na-enye site na triglycerides). Mbelata mbenata mbenata afọ mgbe otu afọ na Xenical (orlistat) ma gbanwee ndụ gị na gburugburu 8.5 n'arọ.
Tinyere ịmalite itinye absorption nke triglycerides nri, ma ọ bụ na-edepụta ntụpọ ntụ ntụ dị na:
• Nwee mmetụta dị mma na mgbali ọbara;
• Nbelata ọgwụ cholesterol ma ya mere ọkwa cholesterol (tinyere LDL cholesterol);
• Mee ka insulin kwụsị; ma
• Na-ejikwa glycemic akara.
A na-echekarị na mmebi ahụ nke eriri afọ na-eme ihe na-adịghị mma, nke na-agba ndị na-aṅụ ọgwụ a ume ka ha na-etinye aka na nri dị ala.
Cetilistat bụ arụmụka okwu, akwụkwọ, pancreatic na ogwu na-egbu egbu nke lipase.
Ngwá ọgwụ ọgwụ na-ekpuchi ọgwụgwọ bụ ọgwụ arụpụtara iji mesoo oke ibu. Ọ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka ọgwụ a kọwara n'oge gara aga dị ka Xenical (orlistat) site n'ịchịkwa lipase pancreatic, enzyme nke na-akụda triglycerides n'ime eriri afọ anyị. Enweghị enzymes ndị a, a na-egbochi triglycerides site na nri anyị ka a ghara ịdaba n'ime mmiri ara ehi bara uru bụ nke nwere ike itinye obi gị ma wepụ ya n'arụghị ahụ.
N'ọnwa ndị a na-ahụ maka ndị ọrịa na-enweghị ọrịa na-enweghị ụdị ọrịa shuga 2 na ndị ọrịa buru ibu na-ebi ụdị ọrịa 2. Mgbe a na-edozi ntụpọ ntụpọ na-edozi ahụ maka izu iri na abụọ, ọ na-ebute obere arọ ahụ, cholesterol zuru oke, cholesterol dị ala na-adịghị ala ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere placebo.
Onu ogugu ndi mmadu buru oke ibu na egosiputa oke nbibi nke uzo obula nke 5 percent karia n 'aka obula ndi ozo ma e jiri ya tụnyere placebo. N'ime ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga buru ibu, HbA1c (glycosylated hemoglobin) na-ewetakwa ala. Ngwá ọgwụ ọjọọ na-ekpuchi ọrịa na-egosi na ọ dị oke njọ na-akpata mmetụta ọjọọ, bụ nke na-ebutekarị steatorrhea (ọdịdị akwara afọ) na enweghi ike ịdaba karịa nke ahụ. A nabatara ọgwụ a na nso nso a na Japan iji mesoo oke ibu na nsogbu ndị ọzọ.
Nchịkọta ọnụ ntụ ntụ
Dị ka a na-ahụ site na mkparịta ụka anyị zuru ezu, e nwere ọtụtụ ọgwụ ndị na-efu ọnwụ na-esite na mbara igwe dị iche iche. A chọpụtala ọtụtụ n'ime ọgwụ ndị a dị irè, ụfọdụ ndị ọchịchị dịka FDA na Japan kwadoro ụfọdụ n'ime ha, ikwu banyere ole na ole, maka ọgwụgwọ oke.
Mgbe anyị tinyechara ọtụtụ awa nyocha na ọgwụ ndị na-ebu ibu, anyị nwere ike ịchọpụta ihe mgbakwunye 2018 World's Best-Selling Weight Loss Powder Supplement. Ihe mgbakwunye ndị a na-efu ọnwụ na-agụnye orlistat arọ ọnwụ ntụ ntụ na lorcaserin arọ ọnwụ ntụ ntụ. N'adịghị ka ọnụọgụ nke mgbakwunye ọnwụ dị na ụlọ ahịa ọgwụ ọ bụla, ọgwụ ndị a na-efu ọnwụ nke ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa agabigala ọtụtụ afọ nyocha iji nweta akara nkwado site na FDA na ọtụtụ ikike ndị ọzọ. Anyị na-akwado gị ka ị nwalee ọgwụ ndị a n'ihi na egosila na ọ bụghị naanị ọfụma kamakwa ọ dị mma iji.
Ihe edere edere nke ederede:
7 Best Nootropics (Smart Drugs) na ahịa nke 2021 7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Armodafinil